China Automatic Ferrite Magnetik Hydraulic Press Manufacture na Factory | Ekechukwu
Akụrụngwa nke igwe: pịa (tinyere ngwugwu waya magnetized), ebe a na-agbapụta hydraulic, ụlọ ọrụ nchịkwa eletriki, usoro ogwu na ịgwakọta, ebe nchekwa ọkụ; ebu eku, akpaka ide na-ewe anya igwe.
Basic Nka na ụzụ nkọwa
1) A na-eji sistemụ hydraulic gear gear iji mee ka mmanụ nrụgide dị jụụ iji hụ nrụgide, nkwụsi ike na ntụkwasị obi mgbe a na-eji pịa pịa ogologo oge;
2) Obere ike oriri na ike nchekwa. Ike oriri nke igwe dum dị ka nke ọkpọ 150, na mmepụta nke ngbanwe ahụ bụ 53% karịa nke nke 150-ton press;
3) A na-edozi isi ihe eji edozi ọkọlọtọ na onye nnabata ahụ, na akụkụ ndị a kpụrụ akpụ nwere ike gbasaa ngwa ngwa ma dochie anya mgbe a gbanwere ihe ahụ, na ntọala ebu na ebu ahụ nọọrọ onwe ha;
4) Isi ahu bu ihe eji eme ya (ma obu ihe nkedo), ya na okpukpu elu ya na ala ya, ihe ndi ozo, ihe nkpuchi nke nwere ihe ndi ozo, wdg. High n'ibu ike, kọmpat Ọdịdị, obere echichi ebe, adaba n'ihi na ntuziaka ma ọ bụ akpaka oghere na-ewere;
5) Akụkụ bụ isi bụ usoro kọlụm anọ, nke na-anabata ngwugwu waya ikuku dị elu.
6) ịmụta ihuenyo mmetụ na ihe mmetụta na-aghọta nwoke-igwe interface, debugging bụ adaba na ngwa ngwa;
7) Ihe akụrụngwa nke hydraulic nke nnukwu ụlọ mgbapụta dị elu na-eji valvụ teknụzụ Italiantali,
8) Ghichaa obere slurry ọdịnaya (34% mmiri mmiri) ogwu ogbugba, na-edozi ma nwee ntụkwasị obi
Caselọ ọrụ Case
Oke elu nke cylinder
Mkpụrụ vaịn nke elu
Mkpụrụ osisi elu cylinder
Lower cylinder ike
Lower cylinder n'obosara
Mbelata nke ala
Presspị ọsọ ọsọ
Max. free ohere nke elu na ala worktable
Worktable size (ogologo X obosara)
Top-n'ịnyịnya ikuku-mma waya ngwugwu
Air-mma magnetizing eriri igwe 100000ampere-uzo
Max. ogwu ogbugba nke injection mgbapụta
Max. loading nke igwekota
Ike niile nke igwe dum
550mm ọdịiche dị n'etiti ebu ntọala, elu 300mm
Kpụrụ nke Servo Control
Cyllọ nnukwu ụlọ dị elu nke nwere ihe nrụgide nrụgide, slide kwadebere ya na ihe njikwa ihe ngbanwe. Dabere na mgbaàmà nzaghachi nrụgide, mgbaàmà nzaghachi ọnọdụ, akara mgbaama enyere, akara mgbaama na akara ọsọ nyere iji gbakọọ ọsọ ntụgharị nke igwe ọrụ, iji chịkwaa mgbapụta mgbapụta maka nrụgide, ọsọ na njikwa ọnọdụ.
Ndi oru akuko jiri PID dozie nsogbu na onodu, site na oso nke igwe eji ebu uzo ka o buru uzo mechiri emechi. Site na ịhazigharị ọsọ nke igwe ọrụ ahụ, ọ nwere ike ijikwa nrụgide, ọsọ, ọnọdụ na akụkụ ndị ọzọ nke igwe akụrụngwa hydraulic, site na iwepu valvụ njikwa nrụgide, valvụ akara na-agba ọsọ na ihe ndị ọzọ dị na njikwa hydraulic njikwa iji mee ka ọ dị mfe.
Ọsọ ọsọ ọsọ na-ekwe nkwa mmeghe na mmechi ziri ezi, ọnọdụ ziri ezi nwere ike iru 0.1mm, ọnọdụ ọnọdụ ọrụ pụrụ iche pụrụ izi ezi nwere ike iru ± 0.01mm.
Nkọwa dị elu, usoro PID algorithm modul dị elu na-eme ka nrụgide sistemụ na nrụgide na-agbanwe agbanwe nke ihe na-erughị ± 0.5 mmanya, na-emeziwanye ngwaahịa.
N'ikuku ana enweta n'otutu-ihuenyo ulo oru usu kọmputa ọfiọkde isi usoro kwa na kpatara kpaliri nke pịa, tumadi gụnyere ndị na-esonụ isi ọmụma:
● Egwuregwu（Mpa 、 ℃） word Paswọdu echedoro Digital ngosi ● Data traceability
Platen ọnọdụ, 0 na n'ụzọ zuru ezu na-emeghe ọnọdụCycle ngụ oge
Ngwọta usoro, usoro ihe omume ahụ
1.Oil tank e debere jụrụ nzacha usoro (obi jụrụ site mmanụ chiller, mmanụ temperature555 "hụ na igwe nwere ike nwayọọ nwayọọ na ịpị na 24 awa.)
5.The haịdrọlik mmanụ anwụrụ tumadi mere nke enweghị nkebi ígwè ọjà, na nnukwu dayameta mmanụ ụzọ na-flanged. Ejikọtara njikọ ọkpọkọ ahụ site na SAE flange dị ka o kwere mee. Ọ bụ a ịgbanye ịgbado ọkụ ụdị na ezi ịgbado ọkụ mmetụta na n'ụzọ dị irè dozie mmanụ leakage nsogbu kpatara ogbenye ịgbado ọkụ.
Nke gara aga: Metal powder akpụ haịdrọlik pịa
Osote: Nnu ngọngọ haịdrọlik pịa